Munaasabad loogu dabaaldagayo dhalashada Nelson Mandella oo 93 jirsaday oo kadhacday guud ahaan caalamka
Johannesburg:- Guud ahaan dunida gaar ahaan koonfur Africa , ayaa waxaa laga xusayaa maalinta caalamiga ee loogu magac daray xuska Nelson Mandela oo ah madaxweynihii ugu horeeyey ee madow ah oo soo mara dalka koonfur Africa iyadoo maanta uu 93 jirsaday.
Mandela ayaa u dabaaldageya dhalasadiisii 93-aad, waxaana uu munaasabadan xuskeeda ku qaatay gurigiisa oo ku yaala magaala Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Africa.
Guud ahaan hogaamiyeyaasha caalamka iyo dadka u ololeeeya nabada ayaa waxey tahniyad u direen Nilson Mandela oo ah nin ay taariikh-du xustay halgankiisii dheeraa ee kula dirirayey gumeystihii ku dhisnaa midab kala sooca ee ka talin jiray dalkaasi muddo fog.
Nilson Mandela halgankaasi dheer uu galay xorriyada iyo sinaanta waxaa uu ku kasbaday inuu helo abaalmarinta nabada caalamiga ah ee Nobile price oo sanadkiiba mar laga baxiyo dalka Norway.
Nelson Mandela ayaa Sannadkii 1991-kii waxaa loo magacaabay Gudoomiyaha xisbiga ANC, July sannadkii 1991-kii ilaa December 1994-kii ayuu Mandela Noqday Madaxweynahii ugu horeeyey ee madaw ahaa ee soo mara taariikhda dalka Koonfur AFrika, Bishii November ee sannadkii 1999-kii ayuu Madaxweyne Mandela ka nastay dhammaan hawlaha siyaasadda ee dalka Koonfur afrika.
Koonfurta Sudan oo xariga ka jartay lacagteeda cusub
Juba:-Madaxweynaha Xukuumadda Cusub ee koonfurta Sudan Silva Kiir ayaa xariga ka jaray lacagta cusub ee lag isticmaali doono dhulka ay ka taliso koonfurta Sudan islamarkaana u gudbiyey lacagtaas bangiga dhexe.
Silva Kiir oo kalimad ka jeedinayey xafladda furitaanka bangiga dhexe ayaa ku booriyey xubnaha xukuumadda iyo muwaadiniinta in ay lacagtooda ku bedelaan lacagta cusub.
Dhanka kale agaasimaha bangiga dhexe koonfurta Sudan ninka lagu magacaabo Aliija Maaluuk ayaa ku nuuxnuuxsaday in laga bilaabo maanta lacagta cusub ay tahay mid laga isticmaali doono wadooyinka Juba.
Maaluuk oo ka hadlayey qiimaha lacagta cusub ayaa sheegay in ay u dhiganto qiimaha ganiga Sudan, balse ay qaadan doonto bi lama saddex bilood si bedel ay ugu noqoto lacagta sudan ee hadda laga isticmaalo koonfurta Sudan.
Talaabadan ayaa la’aaminsan yahay in ay tahay mid keeni karta khilaaf dhexmara labada dhinac kadib markii ay koonfurta Sudan ku dhawaaqday madaxbanaanideeda 9 bishan July.
Madaxweynaha Sudan Cumar Al-bashiir ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadiisu ay soo saari doonto lacag cusub taasi oo jawaab u ah qaraarka koonfurta Sudan .
Agaasimaha bangiga dhexe ee sudan ninka lagu magcaabo Maxed Kheyr Zubeyr ayaa sheegay in ay qaadan doonaan wax kasta oo ay ku ilaalinayaan dhaqaalaha Sudan.
Woqooyiga iyo koonfurta Sudan ayaa ku heshiiyey in ay koonfurta sudan laga sii isticmaalo lacagta ganiga Sudan muddo lix bilood ah.
Ra’iisal wasaaraha dalka Masar Cisaam Sharaf oo isbitaal la dhigay
Cairo:- Ra’iisal wasaaraha dalka Masar Cisaam Sharaf ayaa loo qaaday isbitaalka kadib markii dhiig kar ku dhacay taasi oo dib u dhigtay ku dhawaaqista isbedelada cusub ee uu ku sameeyey xukuumadiisa.
Wakaaladda wararka bariga dhexe ayaa sheegtay in ra’iisal wasaare sharaf lagu sameeyey baaritaan caafimaad.
Mr Sharaf ayaa waxaa cadaadis uga imanaya kumanaan kun oo qof oo ku sugan fagaaraha taxriir kuwaasi oo dalbanaya in la maxkamdeeyo saraakiishii hore ee dowladii Xusni mubaarak iyo in Maxkamad Lasoo taago Mubaarak iyo wiilashiisa.
Ra’iisal wasaare sharaf ayaa isku shaandheyn ku sameeyey xukuumada iyadoo isbedeladaas ay xilalkoodi ku waayeen ugu yaraan 15 wasiir kuwaasi oo ay kamid yihiin wasaaradii arrimaha dibadda , Maaliyadda, ganacasiga iyo wershadaha halka wasiirka arrimaha gudaha ninka lagu magacaabo Mansuur Ciisawi uu xilkiisa sii hayn doono.
Mr sharaf ayaa dadaal ugu jira sidii uu u raaligelin lahaa shacabka ku sugan fagaaraha Taxriir.
C/fataax Al-banaa oo u sharaxnaa wasiirka aqoonta iyo hidaha iyo dhaqanka ayaa ka cudur daartay in uusan aqbalin qabashada jagadaas kadib markii ay diidmo kala hor yimaadeen muwaadiniinta ku sugan fagaaraha Taxriir.
Walal marka hore waan ku salamay mandela wuxu madaxwenaha qabtay 1994 1999kina wuu ka degay tas ogow